Gasy miresaka | mandimby maharo
Gasy miresaka	Posted on 4 June 2012 by Mandimby Maharo	Hiverina hifandresy lahatra an-databatra indray. Izany indray izao no malaza.
Efa natao avokoa na ny niditra teny an-dapa ka nilazana fa ny fifapiresahan-ireo nomena saza ireo no tena endriky ny demokrasia. Nefa indrisy fa ny olona niditra tao ihany no niova endrika ka nihadongadonga fa ny firenena kaozatina eny ihany. Dia nifampifilafila indray ka dia nivoaka ny iray ary nilaza fa tsy hiverina ao an-trano raha tsy tanterahina ilay Sonia. Miezaka ihany ilay praiministra mpiambina ny lapa ao Mahazoarivo mba hampifanantona ireo samy zaza ao antrano fa eee, tsy nahovoka ilay io. Vaomainka aza nitrifana ho eny amin’ny Kianja izy ireo fa eny indray hono no tena endriky ny demokrasia. Saingy rehefa nodonafan’ny setroka dia kofona ka niverina moramora teny ain’ilay kianja mahazatra. Teto dia ny basy sy ny sora-baventy ny niresaka fa ilay gasy toa niafina tao ambadika ireo.
Etsy andaniny, ireo “zaza nania”, “voailikilika” avy any ankilany koa mba nibetroka ka mba hidina eny amin’ny kianja koa fa voatohitohina ny demokrasia sy ny fahalalahana. Toa afo mololo ihany nefa ka mahamaivay fa vetivety dia levona. Rehefa novalian’ny be baoty sy ny be sandry tamin’ny endriky ny demokrasiany dia feo sisa re manoko fa tsy hita ny olo-tety. Dia mihevitena ho lehibe toy ny sahona miady ho omby ka ùivazavaza ao amin’ilay onja-peo no hany hery. Na dia efa nohatevenin’ireo nalailay fonosana amin’ilay zandry nahalao nahalasana ary izy mianadahy ireto dia toa lasa natao fihomehezana sisa. Dia samy mifamalivaly eny amin’ny haino aman-jery sy ny gasety eny ireo gasy ireo.
Dia izao, hiverina hiresaka indray aloha. Na ny avy any amin’ny mpanohitra na ny ao amin’ny fitatanana ny Hat dia efa samy manaiky fa ilaina ny fifampidinihana. Raha ny 27 May teo no nanao io fanambarana ny fahavononany io ny avy atsy Afrika Atsimo dia ny 03 Jona kosa dia nanaiky tsy sazoka ihany ilay avy etsy Ambatobe fa azo atao izany.
Io hevitra io dia hita koa fa maro no manohana azy. Na ny avy any amin’ny iraisam-pirenena, na ny avy eto an-toerana. Ary hevitra efa nivoaka tany amin’ireo Raiamandreny FFKM ihany koa izany taorian’ireny anatra nataony ireny. Ity vondrona ity miaraka amin’ny Raiamandreny “Mijoro” no be mpangataka mba handray ny andraikiny. Nisy rahateo ny taratasy tatitry ny fivorian’ireo mpanelanelana vahiny manambara ny tsy maintsy hisian’ny fihaonana. Io moa dia fomba fanaon’ireto avy any ivelany ireto. Soratany ao anaty taratasy ilay hevitra dia samy manao sonia ny rehetra manaiky. Avy eo samy mandika izay fahaizany ilay tsy tenin-drazany ireo gasy.Izay tsy manaiky na manana fitarainana dia manoratra any aminy.
Ny mila ho jerena ary raha izany no malaza dia ny endriky ny fifampiresahana sy ny horesahana. Raha ilay avy any Afrika Atsimo aloha dia tsy nametraka fepetra mihintsy amin’izay toerana na izay fotoana hanaovana izay fihaonana izay. Nefa kosa re fa eo amin’ny votoantin’ny resaka no iadiana mafy satria eo ireo lazaina fa fepetra mba hisian’ny fitoniana sy fifampitokisana.
Raha ilay nilaza fa tsy hiandry fa hiroso amin’ny fifidiananasaingy nahazo teny hifampidinika tany amin’ny firenena mikambana tany angamba, dia toy ny mahazatra: Milaza hatrany fa tsy mahalala ny fisian’izany taratasy izany. Izay ilay fomba mody fanina dia milaza izato na zaroa mba ilazana fa izy ny nahita ny hevitra.
Dia miandry aloha zany fa gasy; hoy ny fiteny izay. Ny samy lehibe koa moa no miady sy hifampiresaka ka aleo mihatakataka sao voapotsipotsika, ny tena rahateo madinika. Miandry zatria n any fotoana anaovana izay fihaonana izay na ny toerana na ireo tena handray anjara n any mety ho endriny dia tsy mbola misy azo lazaina. Dia hisy ilaza indray izao ireo rehetra ireo fa endriky ny demokrasia koa izao fihaonana izao. Ary izay ilay hoe fifampiresahan’ny samy Malagasy.